As of Wed, 12 Aug, 2020 23:15
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अबको बाटो
म नेपाली, आफ्नै नोट तथा विभिन्न राष्ट्रिय चिह्नसहित नेपाली हुनुमा म गर्व गर्छु । आफ्नै वेशभूषा तथा भाषा, विश्वकै दुर्लभ विशिष्टीकृत भूगोलको पहिचान हुनुमा गर्व गर्छु । तिब्बत–नेपाल युद्धका ठेली पल्टाउँदा होस् या अंग्रेजविरुद्ध लड्दा होस्, ती वीरगाथाका ठेली पल्टाउँदा मलाई नेपाली हुनुको छुट्टै आनन्द हुन्छ । आनन्द हुने अर्को तŒव पनि छ, त्यो हो— राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान ।
अर्थव्यवस्थामा श्रम सहभागिताको प्रवृत्ति
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै मात्र श्रमशक्ति सर्वेक्षण– सन् २०१७-१८ का नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ, जसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
विश्वव्यापीकरण र नेपालको हुलाक सेवा
विश्वव्यापीकरणको अवधारणाको व्यापकता खास गरीकन सन् १९८० को दशकबाट आएको हो । यसको सोझो अर्थ उत्पादन, पुँजी, प्रविधि, श्रम तथा संस्कृतिको विश्वस्तरमा हुने निर्वाध आवागमन, एकीकरण र अन्तरनिर्भरतालाई बुझिन्छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, भौगोलिक बन्धनबाट मुक्त आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक गतिविधि नै विश्वव्यापीकरण हो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता
गत हप्ता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको विवरण सार्वजनिक ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०२१-२२ देखि नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशन गर्न सुरु गरिएकोमा यस्तो संयोग पहिलो पटक देखिएको हो । गएको ५५ वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा राम्रो दरको आर्थिक वृद्धि एक दर्जन पटक देखिएको भए पनि गत तीन वर्षमा देशको अर्थतन्त्र लगातार ६ प्रतिशतभन्दा राम्रो दरमा अर्थात ७.७ प्रतिशत, ६.३ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशतले विस्तार हुनु हाम्रो लागि सुखद समाचार हो ।
हिन्दू मिथक र खगोल विज्ञान
मानव र ब्रह्माण्डको अन्तरसम्बन्धबारेमा हिन्दू ग्रन्थमा अनेक मिथक छन् । खगोलको अध्ययन गर्न तल्लीन आधुनिक भौतिकशास्त्रीहरूले पत्ता लगाएका भनिएका विषयलाई हिन्दू ग्रन्थका मिथकसँग संयोजन गरेर हेर्दा निकै रोचक पक्षहरू पाइन्छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको जापान गन्तव्य
विश्व पर्यटन बजारमा जापानी पर्यटक अर्थात् जापान बजारलाई एउटा भ्यालु मार्केटका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । सन् २०१८ विदेश भ्रमण गर्ने जापानीको संख्या करिब १ करोड ९० लाखको हाराहारीमा पुगेको छ भने बढ्ने क्रम पनि जारी छ ।
शुक्रवार, बैशाख १३, २०७६
मारमा स्वरोजगारमूलक मिडिया
सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले केही समयअघि एउटा सूचना जारी गरेपछि नेपाली पत्रकारिता जगत्मा पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । विशेष गरी मिडिया उद्योग र व्यवस्थापनमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि त टाउको दुखाइको विषय समेत बनेको छ । उक्त विषय हो— तलबी विवरणको ।
अनलाइन सपिङमा बलियो ब्रान्डको प्रभाव
नेपालमा सञ्चालित उत्पादनशील उद्योगहरूले समेत ब्रान्ड विकासलाई प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन । त्यसकारण मुञ्चा डटकमले पछिल्लो पटक नेपाली निर्यातजन्य उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजार लक्षित माटो डटकमको सुरुवात गरेको छ । बहुराष्ट्रिय अनलाइन सपिङ एमाजोनलगायतका कम्पनीहरूले उच्च बजार हिस्सा बटुल्नका लागि लगानी वृद्धि गर्दै लगेका छन् । त्यसैको फलस्वरूप बजारको दायरा फराकिलो बनाउने प्रतिस्पर्धामा साना लगानीका कम्पनी बजारमा टिक्न नस्कने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
के अर्थतन्त्रको मियो बन्छ पर्यटन ?
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवालमा कृषिपछि पर्यटनको चर्चा चल्छ । देशको हावापानी, मनोरम प्रकृति, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता, विशेष प्रकारका चराचुरुङ्गी-वन्यजन्तु आदि विदेशी पर्यटकलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने प्रमुख तत्व मानिन्छन् । १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिमिको सानो भूभागभित्र जे–जस्ता भौगोलिक तथा प्राकृतिक विभिन्नता समेटिएका छन्, त्यसले नेपाललाई अलौकिक भूमिकै रूपमा चिनाएको छ । ठिक्कको हावापानी, संसारकै अग्लो हिमाल, शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मस्थल, चित्ताकर्षक ताल-तलाउ, नदी-झरना, हिमाल-पहाड-तराई अलगअलग भूभागको मिश्रित रूप आदि विशेष उल्लेखनीय छन् ।
फागुन १५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि उडानसम्बन्धी मापदण्डको परिपालनामाथि प्रश्न मात्र उठाइएन, उच्च पदाधिकारीहरूको उडान सुरक्षित बनाउन थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुससमेत गरियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली फागुन २१ मा चन्द्रगढी विमानस्थलबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउने क्रममा उहाँ सवार यति एयरलाइन्सको उडान एनवाइटी ९२६ काठमाडांैको आकाशमा लामो समय होल्ड भयो ।
गएको चैत अन्तिम साता नेपालमा लगानी सम्भाव्यताको खोजी गर्न फ्रान्सेली लगानीकर्ताहरूको टोली काठमाडौंमा आई नेपाली उद्यमीहरूस“ग गहन छलफल ग-यो । त्यसको चा“जोपा“जो नेपालस्थित फ्रान्सेली राजदूत फ्रान्सा“ जाभियर लेजेरले मिलाउनुभएको थियो भने त्यसलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साथ दियो ।
बुधवार, बैशाख ११, २०७६
भोलि होइन, आजै काम गरौं
‘आज मौसमले साथ दिएको छैन, भोलि काम गरौं न हुन्न ?’ ‘छोड्दे यार, भोलि गरौँ यो काम ।’ ‘कति काम गर्छस्, भोलि गर् अब ।’ ‘आजलाई भयो, भोलि गर्छु अब ।’ हो, तपाईं–हामी दैनिकजसो कुनै न कुनै परिस्थितिमा यी वाक्य भन्छौं, सुन्छौं । तर, तपाईंहरूलाई थाहा छ ? भोलि भन्ने शब्दले गर्दा देशका धेरै ठूला विकासका योजनाहरू केवल भोलिमा सीमित भएका छन् ।
नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रका बारेमा सामान्य शिक्षा हुनु नै नागरिक शिक्षा हो । नागरिक शिक्षाले समाजका सदस्यहरूलाई नागरिक अधिकार, कर्तव्य, शासकको दायित्व, आदर्श नागरिकका लागि आवश्यक गुणहरूजस्ता विषयमा ज्ञान दिने कार्य गर्छ । नागरिक भनेको के हो ? नागरिक हुनु र नहुनुमा के अन्तर हुन्छ ? नागरिक अधिकारको उपयोग कसरी गरिन्छ ? समाज र राज्यबाट नागरिकले कस्तो नागरिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् ? जस्ता सवालका बारेमा स्पष्ट जवाफ दिने कार्य नागरिक शिक्षाले गर्छ ।
खुला ठाउँमा मासु काट्दा र त्यही मासु खाँदा स्वास्थ्यका हिसाबले हानीकार मानिन्छ । तर दिनैपिच्छे मासु काट्ने टोललै पिच्छे मासु पाइने देशभरिका सहरमा ब्यवस्थित पशु बधशाला प्रायः छैनन् । पशुबधशाला नभएकै कारण अत्यधिक मासु खपत हुने लमजुङको सदरमुकाम बेसीसहरमा पनि नागरिकहरू अस्वस्थ मासु खान बाध्य छन् ।